Muuse Biixi “Madaxwayne Farmaajo intii xilka yimid waxay Somaliland la kulantay cadaawad dhan walba ah” – Radio Daljir
Muuse Biixi “Madaxwayne Farmaajo intii xilka yimid waxay Somaliland la kulantay cadaawad dhan walba ah”
Luulyo 20, 2019 8:28 b 0
Madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa walaac mar kalle ka muujiyay waxa uu ku tilmaamay duulaan uu kusoo qaaday madaxwaynaha dowladda faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Madaxwayne Biixi oo xalay ka qaybgalay kulan casho oo loo sameeyey ka qaybgalayaasha carwada buugaagta ee magaalada Hargaysa ayaa sheegay dowladda faderaalka inay kasoo xirtay siyaasaddii Somaliland ee dibadda, ayna ku amartay in xoolaha lasoo mariyo dowladda Muqdisho kahor inta aan loo qaadin dalka Sacuudi Carabiya.
Madaxwaynaha Somaliland ayaa dhanka kalle ka cawday guddigii wadahadalada madaxwaynaha dowladda faderaalka Soomaaliya ee uu u magacaabay Somaliland, isagoona sheegay inay ku jiraan sida uu hadalka u dhigay xubno kasoo jeeda Somaliland, arrinkaasi oo uu ku tilmaamay mid aan ku haboonayn.
Somaliland oo doonaysa inay ka go’do Soomaaliya inteeda kalle ayaa iska indha tirsaysa rabitaanka shacabka gobolada Sool, Sanaag, Buuhoodle iyo Awdal oo ah inaan la kala gooyn dalka Soomaaliya.
Madaxwaynihii hore Koonfur Afrika iyo wafdi uu hogaaminayo oo Muqdisho gaaray
Ciidamada Iiran oo qabtay markab saliidda qaada oo ku gooshayay calanka Britain